It is njengelinye lamazwe zokulala enhle kakhulu, hhayi nje kuphela Puglia kodwa lonke elase-Italy kanye Europe. Borgo Egnazia ibala njengoba omunye the best zokungcebeleka yonke indalo eYurophu. Borgo Egnazia intando charm nawe bendabuko isitayela yezakhiwo uzoqaphela yonkana Puglia, kanye namakamelo awo ezihlotshiswe kahle, amachibi, inkundla yegalufu, ngisho namakilabhu omsebenzi we izingane kanye nentsha. Thola Bari noma Brindisi ngesitimela bese bahambe baye Savelletri di Fasano, ukuthatha umzila ebabazekayo ukubona bonke ubuhle Puglia.
Italy has izindawo eziningi langa ukuvakashela, kepha i-Amalfi Coast iyintandokazi phakathi kwamaNtaliyane uqobo. Futhi omunye the best zokungcebeleka yonke indalo eYurophu khona lapho. San Pietro, nge yayo 57 amakamelo kanye ebukekayo beach-side yokudlela ziyojabula njengoba kwenziwa kuwe ubuhle esifundeni. Ungakwazi ukubhuka okusheshayo isitimela ugibele ezimbalwa ukuze uthole Amalfi, ukusuka eNaples noma Salerno - futhi ujabulele ukubukwa endleleni.
Uma uthanda izintaba ezinhle esikhundleni elikhulu amabhishi, one of the best zokungcebeleka yonke indalo eYurophu ngawe ukuvakashela kungaba e-Austria sika Tyrolean Alps. Ihhotela Tannenhof uqhosha kakhulu ukubukwa entabeni, futhi kungcono omkhulu ski ukubaleka labo abakhetha kancane ngaphezulu umoya yangasese. Ungakwazi ukufinyelela Ischgl kalula kusuka Innsbruck, Zurich, noma Munich - isitimela kuzokusa Landeck, ngemva kwalokho resort kuyinto drive iDemo kude.
KOR-kuyona e esifundeni elihle Bavaria liphakathi engcono zokungcebeleka yonke indalo eYurophu, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokuhlinzeka ngezinsiza ezifana namakheshi okushibilika eqhweni namakamelo afakwe kahle.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-all-inclusive-resorts-europe%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)